हरीबोल काफ्लेको नजरमा ‘म्युचुअल फन्ड’
अर्थ संसार काठमाडौं– नेपालको सन्दर्भमा म्युचुअल फन्डको अर्थ अर्कै लगाईदिए हुन्छ । ...
विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलनका प्रवृत्ति र चुनौतीहरु
विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलन खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि सङ्गठित तबरले अगाडि बढेको छ । विश्वका श्रमिकहरुको मूलधारको रुपमा सन् १९४५ मा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डव्लु.एफ.टि.यू.) को स्थापना भयो तर पुँंजीवादीहरुले श्रमिकहरुको मूलधारका रुपमा रहेको डव्लुएफटियू लाई साझा थलो बनाउन चाहेनन् र अन्ततः विभाजित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड युनियन केन्द्रको रुपमा आईसीएफटियू गठन गरे । ...
राष्ट्र हित विपरित सरकारी बैंकहरुको नीजिकरण : गम्भीर चुनौती ?
संविधान कार्यान्वयनका दिशामा ध्यान नदिई वर्तमान सरकारले मुलुकमा राजनीतिक संकट खडा गरि रहेको बेला आर्थिक क्षेत्रमा पनि समस्या उत्पन्न गर्न बैंक नीजिकरणको प्रकृया अगाडी बढाएको छ । ...
कस्तो आउदैछ श्रम ऐन ?
व्यवस्थापिका संसदमा श्रम ऐन २०४८ लाई संसोधन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारद्धारा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । विधेयकमा श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न र श्रम शोषणका सबै रुपलाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ श्रम ऐन २०४८ लाई संसोधन गर्नुपर्ने कारण विधेयकमा उल्लेख गरिएको...
आइ मिस यु.......
जुनदिनदेखि तिम्रो साथ त्यागेर आएँ, त्यो दिनदेखि खुशी छैन म । देखावटी हाँसो सजाएर बाँचेकी छु । हजारौ सपना काँधमा बोकेर उज्वल भविष्यको खोजीमा तिम्रा यादहरुलाई एउटै सुटकेसमा चाबी लगाएर तिम्रो न्यानो काखलाई त्यागेकी थिएँ । हुन त मैले कसैको करकापमा तिम्रो मायालाई त्यागेकी होईन । म आफ्नै ईच्छाले पाईला अघि सारेकी हुँ । ...
सेयर बजार झर्न सकछ, बेचि हाल्नुस्, बढेपछि किनौला, नवराज घिमिरेको सेयर सस्तोमा बेच्नेलाई ब्यंग्य
सेयर वजारका लगानीकर्ता मित्रलाई म केही महत्वपूर्ण टिप्स दिन चाहन्छु । यो कुरा पढ्नु भयो भने एकमुठी सास रहुन्जेल सेयर वेच्नु हुन्न । ...
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाको अगुवाईमा भर्खरै नेपालमा उर्जा सम्मेलन २०१६ सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उदघाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा करिव ५ सय जनाको सहभागिता थियो । यसप्रकारकोसम्मेलन आयोजना गरेकोमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल धन्यवादको पात्र बनेको छ । यसअघि सन् २००६, २००७, २००८ र २०१३ मासमेत यस्तै सम्मेलन भएका थिए । पहिलेको तुलनामा यसपटकको सम्मेलनमा विदेशी सहभागीहरुको उपस्थिति...
‘मरेकी’ आमासँग जम्काभेट
नमिता पौडेल आज एसएलसी सकिएको छ । अब घर जादैछु । मेरो आफ्नो घर । जहाँ मैले ८ बर्षसम्म लुकामारी खेलेको छु । मेरो प्यारो जन्मघर, जहाँ मेरो बाबा हुनुहुन्छ । उहाँले एक्लै दिनरात मेरै लागि मेहनत गर्दै आउनु भएको छ । आमा बितेदेखि उहाँले अर्को बिहे पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो । मेरो हेरचाहमा कमी होला भनेर उहाँले अर्को विवाह...
१ डिजिटल माध्यममार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यमा राष्ट्र बैंकले राख्यो यस्तो शर्त